टेकु अस्पताल : होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सुझावको ३० रुपैयाँ !
नवराज कुँवर काठमाडाैं, २७ वैशाख
झण्डै डेढ महिना लामो उदयपुर बसाइपछि २५ वैशाखमा काठमाडौं आएँ । कुनै लक्षण नदेखिए पनि रिपोर्टिङका क्रममा विभिन्न ठाउँ पुगेकाले एक पटक पीसीआर परीक्षण गराउन आवश्यक ठानेँ ।
काठमाडौं आउनासाथ धेरै जनाको सम्पर्कमा नगई टेकु अस्पताल गएँ । साँझ पर्नै लागेको थियो ।
सँगै गएका भाइले आरडीटीभन्दा पीसीआर गराउँदा ढुक्क हुन्छ भन्यो । कुरा ठीकै हो । आरडीटीले धेरै रिपोर्ट गलत पनि दिन्छ । पीसीआरका लागि सोधपुछ गरेँ । भनेजस्तो कहाँ सजिलो रहेछ र पीसीआर गर्ने कुरा !
‘यस्तो जल्दोबल्दो मान्छेलाई के को पीसीआर ?’ कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले ठाडै हुन्न भने । उनीहरूका अनुसार गम्भीर बिरामी भई आएकाको मात्र पीसीआर परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।
फेरि मनमनै सम्झिएँ, आजै मात्र सांसद र मन्त्री भएठाउँ गएर पीसीआर गरिएको छ, ती कोही पनि बिरामी जस्तो त लाग्दैन थियो ।
कोरोनाको रेड जोन उदयपुरबाट आएको भनेपछि पक्कै गम्भीरतापूर्व लिएर टेस्ट गरिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, त्यहाँ त्यस्तो केही पाइनँ ।
त्यो दिन टेस्ट नहुने मेसो पाएपछि घर फर्किएँ । भोलि पल्ट बिहानै सहकर्मी दिनेश र प्रदीपजीसँग सल्लाह गरेँ । उहाँहरू टेकु अस्पताल र त्यहाँका चिकित्सकसँग अलि ‘नजिक’ हुनुहुन्छ । सँगै टेकु अस्पताल गइयो ।
फेरि जवाफ उही नै थियो, ‘उहाँ स्वस्थ नै देखिनुहुन्छ, लक्षण पनि केही रहेन छ, पीसीआर गर्न अलि गाह्रो हुन्छ । आरडीटी गराउनु न ।’
ठीकै छ, पहिलो आरडीटी गराउँछु र त्यसपछि मौका हेरेर पीसीआर गराउँला भन्ने लागेर म टिकट काउण्टरतिर लागेँ । आरडीटी गराउनका लागि ३० रुपैयाँ तिरेर पूर्जा लिएँ ।
पूर्जा लिएर आरडीटी भइरहेको क्षेत्रमा केहीबेर लाइन बसेँ । पालो आयो । आरडीटी गर्न बसेका चिकित्सकले सोधपुछ गर्न थाले, ‘कहाँबाट आउनुभएको ? कहिले आउनुभएको ? लक्षण छ कि छैन ? इत्यादि । मैले जवाफ दिँदै गएँ ।
अन्तिममा ती चिकित्सकको जवाफ सुनेर म ट्वाँ परेँ । उनको जवाफ यस्तो थियो, ‘तपाईंको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नआए पनि प्रभावित क्षेत्रबाट आएकाले तपाईं १४ दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बसिदिनुहोला । अहिले आरडीटी गर्ने किट सकिएको छ ।’
पूर्जामा पनि हाेम क्वारेन्टाइन भनेर लेखियाे ।
त्यति ज्ञान भएकाले त म काेहीसँग सम्पर्कमा नगइ परीक्षण गर्न टेकु अस्पताल पुगेकाे थिएँ । मलाई थाहा भएकै कुरा भनेर टेकु अस्पतालले मसँग ३० रुपैयाँ लियो । त्यसरी ३० रुपैयाँ तिर्नेहरूको भीड छिचोलेरै म त्यहाँ पुगेको थिएँ । त्यसपछि प्रयोगशालाका एक चिकित्सकलाई सहकर्मी दिनेश र प्रदीपजीसहित भेटेर कुरा गर्‍यौँ । उनी कन्भिन्स भए र तत्कालै मेरो स्वाब संकलन गर्न लगाए ।
२४ घण्टापछि रिपोर्ट नेगेटिभ आयो ।
मैले त आफ्ना साथीमार्फत पहुँच पुर्‍याएँ र परीक्षण गर्न पाएँ । तर, त्यहाँ निराश भएर फर्किने थुप्रै थिए ।
सुनसरीको इटहरीबाट हालै काठमाडौं आई आरडीटी गराउन टेकु पुगेकी एक महिला भन्दै थिइन्, ‘घरबेटी र छरछिमेकले शंकाको नजरले हेरे, रिपोर्ट लिएर जान पाएको भए ढुक्क हुन्थ्यो । तर, पाइएन ।’
सरकारले यति परीक्षण गरियो, उति गरियो भनेर दाबी गरिरहँदा धेरैको आशाको केन्द्र मानिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आरडीटी समेत गर्न नपाइनु चानचुने समस्या हुँदै होइन ।
एकातिर लकडाउन अनिश्चित छ, अर्कातिर टेकुजस्तो अस्पतालमा परीक्षण किट सकिएको छ । यो पाराले कोरोना कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ होला त ? नेता र मन्त्रीको स्वाब नमूना संकलन गर्नचाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले धाउनुपर्ने तर, सर्वसाधरण आफैं धाएर अस्पताल पुग्दा पनि परीक्षणको प्रबन्ध गर्न नसक्नु, सरकारका लागि योभन्दा ठूलाे विडम्बना, लज्जास्पद विषय अरु के हुन सक्छ ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २७, २०७७, १७:५५:००